TECH & TELECOM Archives - TELES EZE
Ichedo netwọki WiFi gị na paswọọdụ siri ike dị mkpa. O di nwute, ọ bụrụ na ọ furu efu, mara na ọ ga-ekwe omume iji nwetaghachi ya. Lee ọtụtụ ụzọ. Ikpuchido WiFi gị dị ezigbo mkpa. Nke a na - enyere aka izere ...
TELES RELAY	 June 15, 2021 0
Ndị okike nke Just Cause na-arụ ọrụ na ikikere ọhụụ sọsọ na consoles Xbox. Nke a mabu dị ka Project Typhoon, Avalanche Studios 'Contraband bụ egwuregwu co-op edobere na 1970s na…
iCloud Mail maka web ga-enweta usoro ọhụụ ọhụụ. Versiondị a na-anwale ugbu a na ụfọdụ ndị ọrụ aka. Ọrụ na ngwa weebụ dị ka ngwanrọ ọ bụla. Ndị a ...
Wondered nwetụla mgbe ị na-eche ihe mkpụrụ akwụkwọ “i” pụtara na iPhone na ebe o si? “Otu iPod. Ekwentị. Ihe nchọgharị weebụ. Ị ghọtara ? Ọ bụghị atọ ...
Tiny Tina's Wonderlands: Borderlands na-enwe nnukwu echiche efu
Mgbo na-ezute anwansi na mma agha na ụwa dị ka ọgba aghara dị ka ọ dị egwu, nke Tiny Tina na-enweghị atụ, nke na-emepụta iwu, na-agbanwe ụwa ka ọ dị ma na-eduzi ndị egwuregwu na njem ha. Standalone ekewet ...
Google, Facebook, Amazon: Ndị omeiwu US na-eweta iwu 5 na-egbochi GAFAM
Ndi ochichi nke ndi ochichi n’ime ulo nnochite anya ga -eweta n’izu a ego 5 iji gbochie ike ndi oru ntanetị dika Google, Amazon na Facebook. Dabere na saịtị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị a bụ ndị kachasị ...
Apple Watch: otu esi ewepu oghere
Etu ị ga - esi hapụ oghere gị Apple Watch ma ọ bụrụ na ọ gwụla, ma ọ bụ ka njọ, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịwụnye mmelite watchOS? Anyị na-agwa gị ihe niile. N'adịghị ka iPhone, iPad ma ọ bụ ọbụna Macs, Apple Watch adịghị enye ...
Mwakpo: usoro sci-fi na ndị ọbịa na Apple TV +
"Chebe ụmụ mmadụ gị." Emepụtara ma dee ya site n'aka Simon Kinberg (The Martian, Logan, Fantastic Four) na David Weil (Solos, Hunters, Moonfall), ma Oscar na Emmy ndị ahọpụtara aha abụọ, mana Jakob Verbruggen duziri ya
TELES RELAY	 June 10, 2021 0
Ọ bụrụ n’ịchọghị mkpa ọ dị iji nbanye nbanye na Windows 10, mara na ọ ga-ekwe omume ịkwụsị ya. Nke a bụ otu esi eme ya. Inwe ihuenyo nbanye na kọmputa gị bụ ihe zuru oke taa, ma ị na-eji ...
Micromania-Zing: mgbazinye awade maka kacha ọhụrụ consoles si Sony, Nintendo na Microsoft
TELES RELAY	 June 9, 2021 0
Na mmekorita ya na BNP Paribas Personal Finance na BNP Paribas Cardif, Micromania-Zing na-abanye na mgbazinye nke consoles na usoro ego na-adọrọ adọrọ na uru ndị ọzọ. Ndị a mgbazinye awade na abụọ ma ọ bụ atọ ...
1 2 3 ... 113 esote